စီးရီးအေ ရာပြည့် သွင်းဂိုးရရှိခဲ့ခြင်းမှာ ကစားသမားဘဝ၏ ဂုဏ်သိက္ခာ မှတ်တိုင်တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ေ - Yangon Media Group
စီးရီးအေ ရာပြည့် သွင်းဂိုးရရှိခဲ့ခြင်းမှာ ကစားသမားဘဝ၏ ဂုဏ်သိက္ခာ မှတ်တိုင်တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ေ
ဆမ်ဒိုးရီးယားအသင်းကို အနိုင်ရရှိခဲ့သည့် စီးရီးအေပွဲစဉ်တွင် တစ်ပွဲတည်း လေးဂိုးအထိသွင်းယူကာ စီးရီးအေ ရာပြည့်သွင်းဂိုးပိုင်ရှင်ဖြစ်သည့် အိုင်ကာဒီက အသင်းအတွက် ဂုဏ်ယူစရာအခိုက်အတန့်တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ကြောင်း၊ ကစားသမားဘဝ၏ ဂုဏ်သိက္ခာမှတ်တိုင်တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောကြားခဲ့သည်။
အင်တာမီလန်အသင်းတွင် ခြေစွမ်းပြ ကစားလျက်ရှိသည့် အိုင်ကာဒီသည် ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲဝင် အာဂျင်တီးနားအသင်းတွင် ပါဝင်ခွင့်ရရှိရေးအတွက် စိတ်အားထက်သန်လျက် ရှိနေသော်လည်း အာဂျင်တီးနား လက်ရွေးစင်အသင်းနည်းပြ ဆမ်ပါအိုလီအနေဖြင့် လက်ရှိအာဂျင်တီးနားလက်ရွေးစင် လူစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းရွေးချယ်ရန် မသေချာသည့် အခြေအနေတစ်ရပ်တွင် ရှိနေခဲ့ကြောင်းလည်း သတင်း ဖော်ပြမှုများအရ သိရသည်။
”စီးရီးအေသွင်းဂိုး ၁ဝဝ မြောက် သွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သလို အင်တာမီလန်ကစားသမားဘဝရဲ့ ရာပြည့် သွင်းဂိုးလဲ ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက် တကယ်ကို ကျေနပ်ပျော် ရွှင်မိပါတယ်။ ဒီပွဲမှာ သွင်းဂိုး ၁ဝဝ ပြည့်ဖို့ မမျှော် လင့်ရဲခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ စံချိန်တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သလို အသင်းအတွက်လဲ ဂုဏ်ယူစရာ အခိုက်အတန့်တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ အထူးသဖြင့် ကစားသမားဘဝရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာပိုင်းအရ မှတ်တိုင် ကောင်းတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့တာပါပဲ”ဟု အိုင်ကာဒီကဆိုသည်။
'မုဒြာရဲ့ခေါ်သံ'မှာ ကျွန်မရဲ့ မင်းသား၊ မင်းသမီးတွေဟာ ထိုက်သင့်တဲ့ အနုပညာကြေးကို မရခဲ့ကြပါဘူ?
UFC ကစားသမား အဖြစ် ရပ်တည်ရန် သေချာခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန် လက်ဝှေ့ကျော် မေဝဲလ်သာ အတည်ပြု
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ အသုံးစရိတ်မတင်သူ တစ်ဦးမျှ မရှိဟုဆို
လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ ကင်းရှင်းကြရန် ပြည်သူနှင့် တိုက်ရိုက် ထိတွေ့နေရသော လဝကဝန်ထမ်းများကို ပြည်ထေ
ရန်ကင်း ကလေးဆေးရုံကြီးတွင် ဆေးကုသမှု ခံယူနေသော ကလေး ၃၅ဝ ကျော်ကို မြန်မာ-တရုတ်ယဉ်ကျေးမှု အသင်??
ဟာဇက်၊ ကော်တွိုက်စ်၊ ဝီလျံတို့၏ အပြောင်းအရွှေ့အတွက် မျက်နှာချင်းဆိုင် ဆွေးနွေးမည်ဟု ချဲလ်??
ယခုထက်ပို၍ လေးစားမှု ရှိသင့်ကြောင်း မက်ဆီအား တိုင်တီ ဝေဖန်